आफैं सवारी हाँक्न पाउँदा अरबी महिला दङ्ग… — Newskoseli
हाम्रो नेपाल/राम्रो नेपाल
आफैं सवारी हाँक्न पाउँदा अरबी महिला दङ्ग…
काठमाडौं, ११ असार ।
साउदी अरबका महिलाहरूले आफैं सवारी साधन हाँक्न पाउने भएपछि आइतबार खुशी मनाएका छन् । शनिबार मध्यरातमा शाही घोषणामार्फत् महिलाले पनि सवारी साधन चलाउन पाउने अधिकार दिइएको हो ।
यो घोषणापछि साउदी अरेबिया र उनीहरुसँगै विश्वभरकै महिलाहरुले खुशी व्यक्त गरेका हुन् । महिलाहरुलाई सवारी साधन चलाउन अहिलेसम्म बन्देज लगाउनेमा विश्वको एउटा मात्र मुलुक साउदी अरब बाँकी थियो ।
साउदी अरबमा पनि महिलाहरुलाई सवारी साधन लगाउन पाउने व्यवस्थालाई धेरैले एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा लिएका छन् । साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सल्मानले यहाँका महिलाले सवारी चलाउन नपाउने कानुनलाई रुढीवादी संस्कार भन्दै आफ्नो मुलुकलाई पनि आधुनिकतातर्फ लान यस्तो कदम चालेको बताएका थिए ।
सवारी साधन चलाउने अनुमति पाएसँगै राजधानी रियादसहितका प्रमुख शहरहरुमा महिलाहरुले बिहानैदेखि सवारी साधन चलाएका थिए । ‘मलाई यो दिन आउँछ भन्ने पहिले नै थाहा थियो, तर सोचेभन्दा केही चाँडो आयो,’ कार्यक्रम सञ्चालक तथा लेखक समर अल्मोग्रेनले भनिन्– ‘मैले यो व्यवस्थासँगै आकाशमा उड्ने चराजस्तै निकै ठूलो स्वतन्त्रताको महशसस गरेकी छु ।’
झन्डै ३० लाख महिलाले नयाँ स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यहाँ यसै महिनाको शुरूमा पहिलो पटक महिलाको नाममा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो । महिलालाई सवारी चलाउन दिने घोषणा भने अघिल्लो सेप्टेम्बर महिनामा नै गरिएको थियो । त्यसपछि यहाँका महिलालाई सवारी अनुमतिपत्रका लागि तालिम दिने क्रम शुरु गरिएको थियो ।
महिलाहरूले सवारी साधन चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित अधिकारवादीहरूले लामो समयदेखि साउदीमा अभियान चलाइरहेका थिए । अनुमति नभएको समयमा पनि महिलाले सवारी चलाएको भन्दै सन् १९९० मा साउदी अरेबियाको शहर रियादबाट दर्जनौं महिला पक्राउ परेका थिए।
साउदीको विद्यमान कानुन अनुसार यहाँ पुरुषले मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने गरेका थिए । सो कानुनमा संशोधन गरी युवराजले नै आदेश दिएपछि महिलाले यो अधिकार प्राप्त गरेका हुन् । नयाँ अधिकार पाएसँगै कयौं महिलाले सवारी साधन चलाउने तालिम लिएका र सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विश्वका देशहरुले महिलालाई पनि गाडी चलाउन दिने साउदी राजाको आदेशको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले राजाको यो कदमले साउदी अरेबियाका महिलाले केही मात्रामा भए पनि अधिकार प्राप्त गरेका तर्क दिएका पनि विश्वका विभिन्न देशका महिला अधिकारकर्मी तथा संघ–संस्थाहरुले जनाएका छन् । –रासस/एएफपी
६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प : ८ को मृत्यु, सयौं बेपत्ता…
धर्मगुरुलाई मृत्युदण्ड दिन अदालतलाई सरकारी अधिकारीहरूको ‘सुझाव’ !
बोकोहरामको हमला : ४८ पुगे मृत्यु हुने सैनिक…
अमेरिकी दबाबमा तेलको आयात रोकिँदै !
रहेनन् राष्ट्रसङ्घका पूर्वमहासचिव अन्नान : विश्वभरबाट शोक व्यक्त गर्दै कसले के भने ?
भियना संसारकै १ नम्बर ‘बस्न योग्य सहर’ ! दमास्कस १ नम्बरको ‘बस्न अयोग्य सहर’ !
आजको तिथि, मिति र अहिलेको समय
Follow @Newskoseli Tweets by Newskoseli
कोसेली मिडिया सपोर्ट प्रा.लि.
का.म.न.पा.– ३१, बागबजार, काठमाडौं, नेपालद्वारा
सञ्चालित अनलाइन न्युज पोर्टल
रामबहादुर तामाङ ‘बले’
सूचना विभाग दर्ता नं.: २०१/०७३–७४
प्रेस काउन्सिल सूचीकरण नं.: २३७/०७२–७३
सम्पर्क फोन नं. : ९८४१ ३८७१७६, ९८४१ ६३१८२९
इमेल : janajibro@gmail.com, mailkoseli@gmail.com
Copyright © 2016-2018 News Koseli | Powered By EasySoftnepal